mardi, 11 février 2020 22:14
Fizahantany: 378 000 ireo vahiny tonga nitsidika an’i Madagasikara ny taona 2019
Naherin’ny 378 000 ny isan’ny mpizahatany nitsidika an’i Madagasikara ny taona 2019 raha 375 000 teo izany tamin’ny 2008, izay taona nahamaro indrindra ny mpizahatany tonga teto amintsika.
Mpizahatany 500 000 no tanjona amin’ny 2023, hanampy amin’ny fanatratrarana izany vina izany ny ITM (International Tourism Fair Madagascar). Andiany faha-9 ny amin’ity taona 2020 ity, izay hotanterahina eny amin’ny Centre des Conférences Internationales eny Ivato (CCI) – Antananarivo ny 18 – 19 – 20 – 21 jona 2020, tafiditra indrindra amin’ny fankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovantenam-pirenena.
Notsipahin’ny « Conseil d’Etat » ny fangatahan’i Rabekoto Arizaka Raoul Romain, filohan’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF), ny hampiantoana sy ny hanafoanana mihitsy ny IST mandrara azy tsy hivoaka an’i Madagasikara.
Betsaka ireo fivoriana tokony sy tsy maintsy atrehiny eo anivon’ny Kaonfederasiona afrikanina momba ny baolina kitra (CAF), sy Federasiona iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra (FIFA), manembatsenana ny asany ny fisian’ny IST ka izay no nitondrany ny raharaha teny anivon’ny « Conseil d’Etat » nanaovany io fangatahana io. Tsy nahazo rariny anefa fa nolavin’ny « Conseil d’Etat » ny fangatahany.
Midika izany fa tsy mahazo miala eto Madagasikara i Arizaka Raoul.
Velon’ahiahy ireo mpitia baolina kitra sao hisy fiantraikany amin’ny hoavin’ny kitra malagasy sy ny Barea, izay eo ampanomanana lalao iraisam-pirenena, izao fepetra ara-pitsarana mahazo ny filohan’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra izao.
mardi, 11 février 2020 20:38
Ratsimandrava-Kennedy: Même mystère !
On a commémoré cette année le 45ème anniversaire de l’assassinat de Richard Ratsimandrava, chef de l’Etat et du gouvernement durant à peine une semaine au mois de février 1975. Selon les enquêtes de l’époque, un petit commando de l’ex-Groupe Mobile de la Police (GMP), anciennement dénommé Forces Républicaines de Sécurité (FRS) aurait attaqué le convoi du chef de l’Etat au cours duquel il aurait été tué.
Notons que 3 membres du commando avaient été tués par les soldats interarmes de l’escorte, alors que les 2 gendarmes assurant la garde rapprochée, c’est-à-dire dans la 404 présidentielle (non blindée), ont aussi péri au cours de l’attentat, et le conducteur gravement blessé.
Le camp du GMP abritant des éléments rebelles au gouvernement de l’époque, le Directoire militaire, a été pris d’assaut et finalement, la totalité des personnes qui y ont été présentes sont traduites devant un tribunal militaire. Et flop tout le monde fut acquitté et entra dans la 2nde République et ainsi se termina cette épisode sombre de l’histoire de Madagascar après les 15 ans de retour de l’indépendance.
mardi, 11 février 2020 20:36
Ambatoboeny: Nanolotra fanampiana ho an’ireo traboina ny Minisitry ny Mponina Naharimamy Lucien Irmah
Tonga taty Ambatoboeny, Faritra Boeny ny Minisitry ny Mponina, Naharimamy Lucien Irmah ny alatsinainy 10 febroary 2020, nitarika dinik’asa niaraka tamin’ireo tompon’andraikitra teto an-toerana Nahatratra 176 ny tokantrano rava trano tato amin’ny Distrika Ambatoboeny.
Nanolotra fanampiana ho an’ireo traboina noho ny ranobe nentin’ny andro ratsy ny faramparan’ny volana janoary 2020 ny minisitra.
Kojakojan-tokantrano toy ny « seau », koveta, vilia, sotro sy akanjo miampy fanampi-tsakafo toy ny vary, voamaina, siramamy, menaka, ronono, paty no nozaraina. Ankizy latsaky ny 5 taona miisa 500 ihany koa no nomena koba.
Niazo an'i Marovoay ny minisitra Naharimamy Lucien Irmah androany.
mardi, 11 février 2020 14:29
Tahiry Ny Rina Randriamasinoro: Voatendry ho Sekretera jeneralin’ny antoko Tiako i Madagasikara
Maka toerana ny tanora eo anivon’ny antoko Tiako i Madagasikara. Nisy androany fivoriana nandinihana sy nandraisana fanapahan-kevitra amin’ny hanomezana ainga vao ity antoko tarihin’i Marc Ravalomanana ity.
Ireo sehatra ampandrosoana aingana an'i Madagasikara:
- Fampianarana, tsy maintsy mianatra ny zaza sy ny tanora rehetra, cantine scolaire, transport scolaire ho an'ny rehetra, maimaim-poana avokoa ny fampianarana amin'ny fanjakana, mahazo vatsim-pianarana ireo mianatra Lycée technique, sy Université, na miankina na tsy miankina fanjakana. Mahazo fanampiana amin'ny fanjakana ireo sekoly tsy miankina sy ireo fikambanana na fiangonana mitaiza sy mampianatra zaza sy tanora.
- Lalana sy fitaterana
- Jiro sy rano ary ny angovo, jiro solaire isan-tokatrano, éthanol
- Fandriam-pahalemana, zon'ny Malagasy no arovana fa tsy ny zon'ny dahalo, tarihina ho any amin'ny tsara ny tanora, izay tsy mandeha amin'ny lalana marina dia tsy misy hantra, fampitaovana moderina ny Foloalin-dahy, Tafika an-tanety, ny Zandarimaria, ny Tafika an-dranomasina sy anabakabaka, ireo vondron-tafika hivelan'ny Foloalin-dahy, ny Polisy, ny pompier, ny pénitencier, ny mpiandry ala, ny polytechnique izay ho raisina toy ny vondron-tafika
mardi, 11 février 2020 11:36
Richard Ratsimandrava: Mijanona ho mistery ny namonoana azy
45 taona katroka androany 11 febroary 2020 no nisy nitifitra teo Ambohijatovo Atsimo – Antananarivo ny kolonely Richard Ratsimandrava, filoham-panjakana, raha hamonjy fodiana eny Anjohy.
Andro talata ny 11 Febroary 1975, tokony ho tamin’ny 8 ora alina no niseho ny tifitra variraraka niantefa tamin’ny fiara 404 berline miloko mainty fitondrana azy.
Maty voatifitra niaraka taminy tamin’io ireo zandary roalahy, mpiambina azy, dia ny GP2 Rabotovao Samuel sy GP2 Rakotoarisoa Bernard.
Ny 5 febroary 1975 ny kolonely Richard Ratsimandrava no notoloran'ny Jeneraly Ramanantsoa ny fahefana feno hitondra ny tany sy ny fanjakana ho Filoham-panjakana, Lehiben'ny Governemanta, Minisitry ny Fiarovam-pirenena sy ny Tetipivoarana.
45 taona, mbola mijanona ho mistery ny namonoana azy. Misy hatrany kosa ny lanonam-pahatsiarovana ireo lavo amperinasa atao isaky ny 11 Febroary.
mardi, 11 février 2020 11:11
Coronavirus: Sinoa sivy sy Malagasy valo no arahimaso eny amin'ny CHU Anosiala
Araka ny fampitam-baovao ao amin’ny pejin’ny DGFS (Direction Générale de Fourniture des Soins) eo anivon’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka malagasy dia « Sinoa miisa sivy sy Malagasy miisa valo no arahimaso eny amin'ny CHU Anosiala amin'ny ady atao amin'ny valan'aretina « Coronavirus ». Roa amin'izy ireo no misy fambaran'aretina ary ny iray dia efa voaporofo fa tsy aretina « Coronavirus » no mahazo azy. Mitohy ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tanana an'izy ireo ».
CHU Anosiala, Kaominina Anosiala, Distrika Ambohidratrimo dia hôpitaly lehibe sy anisan'ny ari-fomba indrindra eto Madagasikara. 18 Km miala an'Antananarivo, raha mizotra miankandrefana amin'ny lalam-pirenena faha-4 miazo an'i Mahajanga iny no misy azy.
Eny no toerana natokan'ny Fanjakana handraisana an-tanàna ireo olona ahiahiana ho tratry ny aretina "Coronavirus".